K-Pop Audition တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် (အပိုင်း-၁) – Trend.com.mm
K-Pop Audition တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် (အပိုင်း-၁)
Posted on June 12, 2020 June 12, 2020 by Mya Thet
ကိုရီးယားရဲ့ Big3Entertainment မှာ Audition ဖြေချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့သိထားရမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကို ပြောပြလိုက်ပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ SM Entertainment ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကတော့ သဘာဝအတိုင်းချစ်စရာကောင်းနေရမယ်၊ပြေပြစ်ရမယ်။ SM ကတော့ Talent ကို 20 % ကြည့်ပြီး Visual ကို 80% ကြည့်ပါတယ်။တကယ်လို့ SM ရဲ့ Trainee တစ်ယောက်ဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံး ၃ နှစ်ကနေ ၆ နှစ်အထိ အပြင်းအထန် Trainee ပေးပြီးမှ Debut လုပ်ခွင့်ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အရည်အချင်းတွေက တိုးတတ်မှုမရှိဘူးဆိုရင် ထုတ်ပယ်ခံရမှာပါ။ P.S SM က 2000 ကနေ 2010 ကြားကိုပဲ ရွေးတာပါ။
SM Entertainment ကတော့ အင်္ဂလိပ်၊တရုတ်၊ဂျပန် စတဲ့ ဘာသာစကားတွေကို တတ်မြောက်ထားတဲ့သူတွေကို ပိုသဘောကျပါတယ်။
JYP Entertainment ကတော့ Talent နှင့် ရုပ်ရည်ကို 50% စီ ကြည့်ပြီးရွေးပါတယ်။
တစ်ခါတလေမှာလည်း အခြေအနေအရမ်းမဆိုးပဲ ကြည့်ကောင်းတဲ့လူတွေကိုလဲ ရွေးလေ့ရှိပါတယ်။
Training ကတော့ ၃ နှစ်ကနေ ၆ နှစ် လေ့ကျင့်ပြီးမှ Debut လုပ်ရပါတယ်။ Talent ရှိရင်တော့ လပိုင်းနဲ့ Training ဆင်းပြီး Debut လုပ်လို့ရပါတယ်။
JYP ကလဲ Big3Entertainment တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် ဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ Vocal or Rap or Dance တွေကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် သေချာပြင်ဆင်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
JYP ကတော့ Foriegner တွေအတွက် အကောင်းဆုံး Entertainment တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။
YG အတွက် Audition ကတော့ နဲနဲစိတ်ဝင်စားစရာပိုကောင်းပါတယ်။ YG ကတော့ Talent 100% ကို ရုပ်ရည်ကြည့်ပြီး မဆုံးဖြတ်ပါဘူး။ YG ကတော့ Big3ထဲမှာ စည်းကမ်းအကြီးဆုံး Entertainment တစ်ခုလဲဖြစ်ပါတယ်။ YG က Idols တွေကိုတော့ လုံလောက်တဲ့ Talent တွေရှိမှာ Debut ပေးပါတယ်။
Trainee သက်တမ်းကတော့ ၄ နှစ်ကနေ ၇ နှစ်အထိကြာနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး YG က Cute Type တွေကို ရွေးပါတယ်တဲ့နော်။
Website Audition မှာဖြည့်ရမှာတွေကတော့
6. Photo (အနီးကပ်တစ်ပုံ/ ခန္ဓာကိုယ်အပြည့်ပါတဲ့ပုံ(အလှပုံ) တစ်ပုံ)
9.Vocal video (1 min –3min)
10. Dance video (1 min –3min)
တို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဖောင်တင်ပြီးလို့ ၂ ပတ်ကနေ ၄ ပတ်အတောအတွင်းမှာ E-mail ကနေ အောင်တယ်၊ကျတယ်ဆိုတာပြန်ပြောပေးမှာပါ။
Posted in Korean, People & Planet